48th MPS All Myanmar Photo Contest (မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း – အမှတ်တရ) – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » 48th MPS All Myanmar Photo Contest (မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း – အမှတ်တရ) – ၁
48th MPS All Myanmar Photo Contest (မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်း – အမှတ်တရ) – ၁
Posted by Mလုလင် on Feb 14, 2012 in Photography |9comments
မှတ်တမ်း တစ်ခု အနေနဲ့ တင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ရွာထဲက ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိသူများ လဲကြည့်ရအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ Man behind the camera ပါ။ MPS ရဲ့ facebook က နေကူးယူပါတယ်။ ပုံအလယ် တဲ့တဲ့ မှာ တံဆိပ်တုံး ထုထားတဲ့ အတွက် .. ရဲရဲ ကြီး တင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်ရမှာပါ ..ဘာလို့ တံဆိပ်တုံး ထုထားလဲ ဆိုတာကိုတော့
ဟုတ်တယ်ဗျို.၊ နည်းပေါင်းစုံနဲ.ကို ခိုးသုံးနေကြတာ။ဒါကိုပဲ တရားမျှတတယ်လို. ယူဆနေကြပြန်ရော။မသုံးစေချင်ရင် အင်တာနက်ပေါ် မတင်နဲ.ပေါ့လို. ပြောတဲ့ ၊ငါ့တိုက်က ကောင်တွေ သွားရိုက်ခိုင်းရင် အချိန်မရွေး ရတယ်လို.ပြောတဲ့၊ မင်းက ဘာကင်မရာနဲ. ရိုက်တာလည်းကွ လို. ပြောတဲ့၊Google ကရှာပေးလို. သုံးတာပေါ့ကွလို. ပြောတဲ့၊ဓါတ်ပုံအသုံးပြုက ၃၀၀၀ ကျပ် ပေးမယ်ကွာလို. ပြောတဲ့၊ ဓါတ်ပုံအင်တာနက် လို. စာတန်းထိုးတတ်တဲ့ စတုတ္ထ သမားတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လို့ ကိုကျော်ကျော်ဝင်း(MPS) က ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပုံပေါင်း ၃၀ တွေ့တယ်။ ပိုစ့် လေးမှာလဲ စိုးရိမ် လို့ ခွဲ တင်မယ် လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ……
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က ပထမဆု ဇော်မင်း (GTS)
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က ဒုတိယဆု ကျော်ဇောလေး
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က တတိယဆု ဦးလူမောင်
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က နှစ်သိမ့်ဆု (၁) စိုးသန်းထိုက်
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က နှစ်သိမ့်ဆု (၂) လင်းပိုင်
BW ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က နှစ်သိမ့်ဆု (၃) ကျော်ဇောလေး
Color ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က ပထမဆု ဦးမျိုးသန်. (တောင်ကြီး)
Color ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က တတိယဆု မျိုးမင်းကြွယ် (ရွှေတောင်ကြား)
Color ရှုချင်စဖွယ် ကဏ္က နှစ်သိမ့်ဆု (၁) ကျော်ဝင်းလှိုင် (ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်)
ကျန်တဲ့ နောက် 10 ပုံ ကိုတော့ ခရီး က ပြန်လာမှ ပဲ တင်ပါတော့မယ်။ မဟုတ် ရင် ၂ ပုဒ် ကျော်တော့မှာမို့ပါ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် သူကြီးရေ .. color နဲ့ Text တွေ မှာ font size လေး နဲနဲ သေးပေးပါလားဗျာ။ ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲ တယ် မတွေ့လို့ပါ။
ပုံတွေကို.. တင်ပြီး Schedule လုပ်ထားရင်မနက်ဖြန်မှတက်လာမှာပါ…
Schedule လုပ်ထားလိုက်ပါပြီ … နောက်ဆံ မတင်းပဲ ခရီးသွားနိုင်ပါပြီ … ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ ..
ကိုရင်လေးတွေ တရားထိုင်နေတဲ့ပုံက တစ်မျိုးလေးဘဲ
ဆြာတွေရဲ့လက်ရာတွေကို ကြည့်ခွင့်ရလို့ ကျေးကျေးပါချင့်
ပုံတွေ အကုန်ကြိုက်တယ်ချင့် …။
ရိုက်တဲ့အယူအဆတွေ သင်ပေးပါလားချင့် …။
အပေါ်ဆုံးကပုံလေးကြည့်ပြီး ကိုယ်လည်း ဒီလိုမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီလိုပုံမျိုး ထွက်မလာတာပဲရှိတယ်။
ကိုရင်လေးတွေ တရားထိုင်နေတာ ပုံလေးက အေးချမ်းမှု ကို တော်တော် ပြနိုင်တာပဲနော်..